ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသင်တုန်းများအတွက် Double Edge Blade များရွေးချယ်ရန်နှင့်ဝယ်ယူရန် - Japan Scissors
ပင်မစာမျက်နှာ / ဘာဘာဆောင်းပါးများ - Straight Razors, Cut လည်ချောင်းနှင့် Shavettes
Safety Razors များအတွက် Double Edge Blade များ ၀ ယ်ယူနည်း
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နိုဝင်ဘာလ 12, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ခြင်း နှစ်ဖက်အစွန်းဓါးသွား သင်၏လုံခြုံစိတ်ချရသောသင်တုန်းသည်အခြေခံများကိုနားလည်ပြီးနောက်လွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်နှစ်ဆအစွန်းနှစ်မျိုးကွဲပြားကြသည်။ ရှန်ဟိုင်းမှဓါးသည်ဂျပန်မှဓါးထက် ၀ ယ်ယူရန် ပို၍ ချိုပေမည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအစားထိုးရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့ကို ပို၍ စျေးကြီးစေသည်။
a ရွေးရန်အကြောင်းကိုဖတ်ပါ ဒီမှာလုံခြုံမှုသင်တုန်း!
ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှစ်ဆအစွန်းသင်တုန်းဓါးအမျိုးအစားများကိုသင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်သင်၏လုံခြုံစိတ်ချရသောသင်တုန်းအတွက်မှန်ကန်သောဓါးသွား ၀ ယ်ရန်သင့်အား အစပြု၍ စတင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
သင်၏လုံခြုံရေးသင်တုန်းဓါးသွားများအကြောင်းလေ့လာခြင်းသည်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤရှုထောင့်များသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးနှစ်ပင်စွန်းသင်တုန်းဓါးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့က“ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြလိမ့်မည် ကွဲပြားခြားနားသောပြတ်သားမှုနှင့်အရည်အသွေးခွဲခြားရန်အရေးကြီးသည်။
Blade Sharpness ဖြစ်သည်
အကယ်၍ ဓါးသည်အစပြုသူအတွက်အလွန်ချွန်နေလျှင်သင်ရိတ်နေစဉ်သင်အလွယ်တကူခုတ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင့်မှာအထိခိုက်မခံတဲ့အရေပြားရှိရင်၊ သင်တုန်း (ရိတ်) အဖု.
Blade မှ Aggressive
နှစ်ဆအစွန်းဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အများဆုံးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာ“ ရန်လိုခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း” ဖြစ်သည်။
နှစ်ဘက်စလုံးမှသင်တုန်းဓါး၏ရန်လိုမှုသည်ဓါးအစွန်း (ဦး ခေါင်း) အားလုံခြုံစိတ်ချရသောသင်တုန်းပေါ်တွင်မည်မျှထိတွေ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မြင့်မားသောရန်လိုမှုပါဝင်နိုင်သည် -
ပိုပြီး angled ဖြစ်ခြင်းနှစ်ဆအစွန်းဓါး
အကယ်၍ သင်သည်ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်သင်တုန်းများနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်ပြင်းထန်သောနှစ်ဖက်အနားသတ်သင်တုန်းဓါးသွားများကိုရှောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊.
အတွေ့အကြုံရှိသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာသန့်ရှင်းသောရိတ်ရန်အတွက်ဓါးသွား၏အမျိုးမျိုးသောရန်လိုမှုအဆင့်နှင့်ထောင့်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ရိတ်သိမ်းမှုသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောကြာမြင့်သောအရည်အသွေးမြင့်နှစ်ဆဘားဘလိတ်များကို ၀ ယ်ခြင်းသည်ရေရှည်တွင်ပိုမိုသက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင့်တွင်အခန်း ၁၀ ခန်းမှ ၂၀ အထိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည့်စျေးပေါသောသင်တုန်းပြားများရှိပါက၎င်းကို ထပ်မံ၍ ကြာရှည်နိုင်သည့်ပမာဏ၏ပမာဏနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ထို့နောက်သင်အကောင်းဆုံးငွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်သင်တုန်းဓါးသွားအမျိုးအစားများနှင့်နှစ်ဖက်အနားသတ်ဓါးကို ၀ ယ်သောအခါမည်သည့်အရာကိုရှာဖွေရမည်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်လာပါကအခြားရိတ်ခြင်း၏အခြားရှုထောင့်များကိုအမြန်ရေငုပ်ကြည့်ကြပါစို့။
အစွမ်းသတ္တိကို ကြမ်း ဆံပင်တစ်ချောင်းစီသည်ပျမ်းမျှလူတစ် ဦး ၏ဆံပင်ထက်ပို။ ကျယ်သည်။
အရေပြား sensitivity ကို
နောက်ဆုံးစဉ်းစားသင့်တာကသင့်မှာရှိ၊ မရှိဆိုတာပဲ ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေ အလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊.
သင့်တွင်အထိခိုက်မခံသောအရေပြားမရှိလျှင်ဤအပိုင်းကိုလျစ်လျူရှုပါ။ သို့သော်သင့်တွင်အထိခိုက်မခံသောအသားအရေရှိပါကအလယ်အလတ်အဆင့်ကြည်လင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ double-edge razor ဓါးသွားကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့အပြင်ဘာဘာဆောင်းပါးများတွင် - Straight Razors, Cut လည်ချောင်းနှင့် Shavettes
Straight Razor နှင့် Folding Razor
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 18, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ဘာဖြစ်တာလဲ Feather သင်တုန်းဓားများကအကောင်းဆုံးလား။